Ilay Venezoela Hotsaroako Mandrakariva · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2014 13:08 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, Italiano, Ελληνικά, Français, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Caracas, Venezoela. Sary an'i danielito311, mpampiasa F.lickr. Nampiasàna ny lisansa Creative Commons (BY-NC 2.0)…..
Ampahany amin'ny fiainana andavanandro ny horohoro sy ny tahotra.
Vao avy nahazo ny diplaoma avy amin'ny sekoly fianarana lalàna ao Lima aho. 1993 tamin'izay, ary vao avy niarina tamin'ny ady an-trano naharitra 12 taona ilay Péro malalako, ady namoizana aina an'aliny maro.
Efa nanakaiky ny Krismasy ka nanapa-kevitra aho hoe fotoana voalohany tamin'izay mba handehanako mandeha mivoaka ny fireneko hamangy ny nenitoako tsy foiko.
Nifindra nankany Venezoela ny zokivavin'ny reniko tamin'ny faramparan'ny taona 1950. Nanambady tany Caracas izy ary nipetraka tany niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany roalahy. Taorian'ny nahafatesan'ilay zana-drahavavin-dreniko taminà lozam-piarakodia, nanamafy ny fifamatorany ny reniko sy ilay rahavaviny ka tsy namela velively ny elanelan-tany tsy hampifanerasera azy ireo.
Rehefa nanitsaka ny faritra ivelan'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Simón Bolívar [es] ao Maiquetía ny tongotro, tonga dia nikapoka ahy ny fahasamihafàn'ny zavatra rehetra, ampitahaina amin'i Lima.
Tanàna maoderina sy mamiratra i Caracas, miaraka aminà havoana avo, lalàmbe migodana, tetezana lavabe, ary ireo arabe vao avy norariana vato.
Toy ireny vao avy nivoaka ny ozinina ireny daholo ny fiara rehetra, manjelatra sy raitra. Zavatra izay vao izàranay ao Péro ny fiara vaovao, taorian'ny fitontongan'ny sandam-bola faran'izay henjana nahatonga [es] anay rehetra ho mpanapitrisa nefa zara raha manana fahefa-mividy.
Toy ny vao avy nolokoina ny omalin'iny ireo mari-pamantarana eny an'arabe.
Tsapako eny amin'izay rehetra jereko ny fandrosoana, ary izany dia avy eo amin'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny tranon'ny nenitoako fotsiny. Nitsena niarahaba ahy ny orana tamin'ity diako ity, zavatra iray tsy mahazatra anay ao Lima mihitsy.
Nanomboka ny fitetezako ny tanàna aho ny ampitson'io. Tsy nahatsiaro ho toy ny vahiny tanteraka aho. Nitombo tao anatinny fanarahana ireny andian-tantara filalao anaty TV vokarina any Venezoela ireny ny andian-taranaka misy ahy, noho izany maro ny toerana toy ny hoe efa fantatro: Chacao, Chacaíto, ny Virgen of Chiquingirá. Toy izany koa ny fomba fiteny malaky izay voamariko nanaraka ahy teny rehetra teny, taorian'ny andro vitsivitsy.
Nandritry ny fitsidihako tranom-bakoka iray, nahita lehilahy iray aho nijery lisitra iray misy ireo ady nataon'i Simón Bolívar, ilay mpanafaka an'i Venezoela, Kolombia, Ekoatora, Però ary Bolivia. Nisy ireo anaran'ny ady saingy tsy nisy torohay mikasika izay toerana nisiany, ary nijoro teo akaikin'io mpizahatany io aho no sady nanomboka taminà lesona iray efa nianarana ela be tany an-tsekoly taloha ela be tany : Carabobo, Venezoela; Boyacá, Bogotá, Pichincha, Ekoatora; ary Junín sy Ayacucho, Però (firenena niavian'ny namanareo)
Tamin'io tsangatsangana io, nandritry ny fitsidihana iray tao amin'ilay tora-pasika iray izay tsy tsaroako intsony ny anarany, sambany nahatsapa ny ranon'ny Atlantika ny rantsan-tongotro, tena noho i Venezoela koa no nananako izany.
Saingy ny tena nampivanàka ahy ankoatra ny zavatra rehetra dia ny fahalalahana ananan'ny vahoaka, miaina tsotra izao fotsiny ny fiainan'izy ireo. Afaka mitsofoka amin'izay trano rehetra ao ianao ary tsy nisy manamboninahitry ny tafika hoe hisava ny kitaponao na ny fanananao. Tsy nisy ftaovana fitiliana vy izany na milina manokana izay tsy maintsy nolalovanay teo am-pidirana ireny trano fivarotana goavana na tranom-bakoka ireny, na taiza na taiza mihitsy e.
Izaho aza nandeha teny anoloan'ny tranoben'ny governemanta sy ireo ministera mihitsy, tahaka ny hoe zava-panao mahazatra izany. Tsy nisy mihitsy olona nanakana ahy tsy ho eny, tsy nisy olona nisava ny taratasiko, ary tsy nisy olona nanao izay hahatsapako hoe misy zavatra tokony hatahorako.
Izany no antony nahavonton'alahelo ahy, raha niraraka ireo sary sy tantara vao haingana nitranga avy ao Venezoela tsy ela akory izao.
Mangirifiry ny Venezoeliana. Mitomany ny Venezoeliana. Misaona ny Venezoeliana.
Mifamory hisian'ny fahalalahana sy mitaky ny hanajàna ny zony ireo mpanao hetsi-panoherana. Maty eny an-dalambe ny tanora, noho ny ady ataon'ny polisy sy ny mpomba ny governemanta amin'ireo mpanao hetsi-panoherana. Miady ny mpirahalahy.
Aleoko ihany mahatsiaro ilay Venezoela fantatro tany amin'ny taona 1993. Mozika karibeana feno firavoravoana miaraka aminà hiran'ny Krismasy erak'izay toerana nalehako. Endrika mitsikitsiky niarahaba ahy, olona miarahaba ahy miraka aminà karazan-teny sy tànana mivelatra, amin'ny fahalàlany fa Peroviana aho.
Venezoela, ho ao am-poko mandrakariva ianao.